မမဝသုန် နှင့် အပြာရောင်တောင်တန်းများ: လူမှုကွန်ယက်သုံးစွဲမှုနှင့် အမြင်များ
၁။ တာဝန်ကြီးကြီးမားမားကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေရခြင်းမရှိသောဝန်ထမ်းများ၊
၂။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အိမ်တွင်းစီးပွားရေး တစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်နေသူများ၊
၃။ ကိုယ်တိုင်ဖိဖိစီးစီး လုပ်စရာမလိုတော့အောင် Well Establish ဖြစ်နေသာ စီးပွားရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူများ၊
၄။ အရွယ်ရောက်ပြီးသားဖြစ်သော်လည်း မိဘ၏ရှာဖွေကျွေးမွေးမှု (သို့မဟုတ်) မိသားစု၏ရှာဖွေကျွေးမွေးမှုကို ထိုင်စားနေကြသူများ၊
၅။ ပေါ်ပင်အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ရင်းပုံမှန်မဟုတ်သော ငွေကလေးနှင့် ကျေနပ်နေသူများနှင့်
၆။ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား များသာဖြစ်ပါသည်။
လူတိုင်းနီးပါး အင်တာနက်နှင့် လူမှုကွန်ယက်များကို ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးနှင့် သုံးစွဲနေကြသော ယနေ့ကာလတွင် ရည်မှန်းချက် ကြီးကြီးမားမားဖြင့် မိမိ တိုးတက် အောင်မြင်ရေးကို ဦးတည်နေသောသူများလည်း ရှိကြပါသည်။
ထို့အတူ မိမိ၏စိတ်ထွက်ပေါက်အတွက် လူမှုကွန်ယက်ကိုဦးစာပေးသုံးနေကြသူများ ရှိကြသကဲ့သို့ လက်ရှိဘဝတွင် နေရာတစ်ခုကို မရရှိသည့်အတွက် အကောင်အထည်မရှိသော ကမ္ဘာတစ်ခုတွင် နေရာတစ်ခုကို ရရှိချင်သူများကလည်း အမျိုးမျိုးသော လူမှုကွန်ယက်များကို စိတ်အားဆေး အဖြစ် သုံးစွဲနေကြခြင်းကို တွေ့ရသည်။ ထိုအခါတွင် အပျော်သဘောမျိုး သုံးစွဲရာမှ စွဲလန်းခြင်းအခြေအနေအထိ ရောက်ပြီး မကြည့်မနေနိုင်အောင် ဖြစ်လာတဲ့အထိ ရူးသွပ်မှုများကို တွေ့မြင်လာရသည်။ မိမိရေးသားထားသောစာများ၊ မိမိတင်ပြထားသောပုံများတွင် မှတ်ချက်လာမရေးသောကြောင့် မိမိ၏ဇနီးကိုရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ အခြားတပါးသူကို အနာတရ ဖြစ်စေမှုများ၊ လူမှုရေးပြဿနာများကို မကြာခဏ သတင်းတွေထဲတွင် မြင်တွေ့နေခဲ့ရသည်။ ထို့အတူ ဤလူမှုကွန်ယက်တွေကြောင့် ဒုစရိုက်မှုများအား တားမြစ်နိုင်ခဲ့ခြင်းတွေကိုလည်း နိုင်ငံတကာသတင်းများထဲတွင် ဖတ်မိကြားမိခဲ့ရသည်။
သုံးတတ်လျှင်ဆေး၊ မသုံးတတ်လျှင်ဘေး ဆိုသောစကားအတိုင်း လူမှုကွန်ယက် သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးများစွာရှိသကဲ့သို့ အကျိုးမဲ့ပြီး အရှက်ရစေသော အဖြစ်များလည်းများစွာ ရှိခဲ့ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိခြင်းဖြင့် ပညာရေး စီးပွားရေးများတွင် တိုးတက်ရာလမ်းစများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားကြသူများရှိခဲ့ကြသကဲ့သို့ မလိုအပ်ပဲ မိမိ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ဝေမျှမိသည့်အတွက် မသမာသူများ၏ အခွင့်အရေးယူခြင်းများကို ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ လူမှုကွန်ယက် ဆက်နွယ်မှုဆိုသည်ကလည်း ယနေ့ခေတ် ကာလတွင် မရှိမဖြစ် ဆိုတာကို မြင်တွေ့လာရသည်။
၁၉ ရာစုနဲ့ ၂၀ ရာစု အဦးပိုင်းကာလများတွင် လူမှုကွန်ယက်ဆက်နွယ်မှုသည် ယခုအချိန်ကဲ့သို့ ကျယ်ပြန့်တွင်ကျယ်ခြင်းမရှိခဲ့သည့်အတွက် အင်တာနက် သုံးစွဲခြင်းသည် မရှိမဖြစ် မဟုတ်ခဲ့သော်ငြားလည်း ယခုအခါတွင်မူ ကမ္ဘာ့ အရှေ့နှင့်အနောက် တောင်နှင့်မြောက်ကို ကွန်ပျူတာလေးဖွင့်လိုက်ရုံဖြင့် စကားပြောလို့ရ၊ မြင်တွေ့လို့ရသည့် အခြေအနေများကို လူသားများ နှစ်သက်မက်မော လာကြခြင်းသည် အမှန်တကယ်တွင်မူ မဆန်းလှချေ။
တွေးတောဆင်ခြင်နိုင်သော အသိဉာဏ်ရှိသည့် လူသားများ ဖြစ်ကြသည့်အလျောက် လူမှုကွန်ယက်များကို သုံးစွဲခြင်းအား အချက်အလက်များကို ရှာဖွေရန်လည်းကောင်း၊ ပညာရပ်များကို ရှာဖွေရန်လည်းကောင်း၊ ကွဲကွာနေသည်မှာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သော မိတ်ဆွေများကို ရှာဖွေရန်လည်းကောင်း၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းအသစ်များ ရရှိရန်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့တွင် ရရှိခဲ့သော အတွေ့အကြုံများမှ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို ဝေမျှရန် မျှသာရည်ရွယ်သင့်ပါတယ်။
ထို့အပြင် Online ဟုခေါ်တွင်သော စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာနှင့် လက်တွေ့ဘဝကို ခွဲခြားသိမြင်ရန်၊ မည်သည့်အရာကိုမှ အလွန်အကျွံ မရှိရအောင် ဆင်ခြင် သုံးသပ်ဖို့ကိုသာ အသိနဲ့သတိယှဉ်ပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမည်သာဖြစ်သည် ။ လူမှုကွန်ယက်များတွင် ၀င်ရောက်လည်ပတ် ဆွေးနွေးရင်း အချိန်ပြည့်နီးပါး အချိန်ကုန်နေမည့်အစား ရရှိလာသော စိတ်ကူးများ၊ အချက်အလက်များကို အရင်းတည်၍ ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းရမည့် မိမိဘဝလမ်း တိုးတက်စေရန်လည်း ကြိုးစားကြသင့်ပါသည်။
မိမိ နှင့် မိမိတို့၏မိသားစု နေထိုင်စားသောက်ရန်မှာ ပြင်ပလက်တွေ့ဘဝတွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ကြိုးစားရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှသာ အဆင်ပြေနို်င်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ယက်တွေကို အပျော်သဘောနဲ့ သုံးစွဲနေကြတာကို စိတ်မကောင်းစရာတွေ့ရတယ်။
To wai moe Naing
Needless to feel unhappy for those youth. The most important thing u have to take note is mind ur own business. Well, mind oneself own business.
အချိန်ရရင် ရသလို လိုင်းပေါ်ကို တက်တက်နေတာကို ဆင်ခြင်ရဦးမယ်။ သတိပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... အစ်မ...